Sababaha loo Isticmaalayo Editor Blog ah
Waa maxay sababta aad ugu gudubto Editor ah Blog Editor ah
Weligaa ma ku qoratay barnaamijka software- kaaga ee blogging marka xiriirka internetka uu hoos u dhaco ama korantadu soo baxday? Miyuu kaa lumay shaqadaadii oo dhan oo aad dareentay dareen aad u xun oo mar walbaa mar kale la sameeyo? Waxaad hoos u dhigi kartaa diiqada adiga oo u beddelaya tifaftiraha blog-ka ah sida BlogDesk si aad u qorto oo aad u daabacato qoraaladaada blogka iyo wixii ka sii badan. Waxyaabaha hoos ku xusan waxay ka kooban yihiin shan sababood oo ugu muhiimsan si ay ugu gudbiyaan tifaftiraha blog-ka ah.
Aan lahayn Internet-ka
Iyada oo tifaftiraha blog-ka ah, waxaad ku qori kartaa boostadaada, sida magaca magaciisu yahay. Uma baahnid xirirka internetka ilaa aad diyaar u tahay inaad daabacdo boostada aad ku qortay. Haddii xiriirka internetka uu hoos u dhaco dhamaadkaada ama server-kaaga martigeliya ee server-kiisu hoos u dhaco, boostadaada looma dhumo sababta oo ah waxay ku nool tahay darawalkaaga adag ilaa aad ka riixdo batoonka daabacaadda gudaha tifaftiraha blog-ka ah. No shaqo kale oo lumay!
Easy To Upload Images iyo Videos
Dhibaato miyey kugu adkaatay in aad daabacdo sawirada ama fiidiyowyada boggaga blogga? Tifatiraha blog-ka ee shabakadda waxay sameeyaan sawirro daabacan iyo muuqaal fiidiyoow ah. Si fudud u geli sawirradaada iyo fiidiyowga iyo tafatiraha offline-ka ah ayaa si toos ah ugu dhajin doona blog-kaaga markaad garaacayso batoonka daabacaadda oo aad daabacdo boostadaada.
Miyaad ku qanacsan tahay markaad sugeysid baqladaada si aad u furtid, si aad u isticmaasho barnaamijka blogging si aad u furto ka dib markaad soo celiso magacaaga iyo lambarkaaga, si aad uqoreeysid sawirada si aad u gudbiso, farriimaha si aad u daabacaan iyo in kale? Arrimahaas waa la tagay markaad isticmaasho tafaftiraha offline. Maadaama oo dhan wax laga qabto kumbiyuutarkaaga maxaliga ah, waqtiga keliya ee aad ku sugayso xiriirintaada internetka inaad sameyso wax walba waa markaad daabacato boostada ugu dambeysa (iyo sababo kale, taasi markasta waa ka dhakhso badan markaad daabacato software-kaaga internetka). Tani waxay si gaar ah waxtar u leedahay markaad qorto blogyo badan.
Si sahlan loo daabaco qoraalada kala duwan
Ma aha oo kaliya in ay si degdeg ah u daabacdo blogs badan sababtoo ah maaha inaad gashid ama ka bixiso xisaabaadka kala duwan si aad u sameyso, laakiin badalashada hal blog ka dhigo mid fudud sida hal guji. Just select blog (ama blogs) aad rabto inaad ku daabacato boostadaada oo dhan waa in ay ku jirto.
Nuqul iyo Paste iyada oo aan lahayn xeerka dheeraadka ah
Haddii aad isku deysato software-kaaga internetka, haddii aad isku daydo in aad nuqul ka sameysatid Microsoft Word ama barnaamij kale, software-kaaga blogga wuxuu u badinayaa in lagu daro code dheeraad ah oo aan faa'iido lahayn, taas oo sababa boostadaada si ay u daabacdo noocyo kala duwan oo xarfaha iyo cabbirrada aad nadiifinaysid ilaa. Dhibaatadaasi waa la tirtiraa tifaftiraha blog-ka ah. Waad daabacan kartaan adigoo aan haysan nambar dheeraad ah.
Toban Sababood oo Bilaabaya Blog
Hel websaydhka Google oo leh goobaha Google
Sida loola xidhiidho qayb gaar ah ee YouTube ah
Talooyin ku saabsan Kick-bilaabida Ganacsiga Web Hosting
Waa maxay Trackback Blog?
Top 20 Aqoonsiga Wareegista
Star Wars: Hogaamiyaha Rogue - Dagaalka Squadron 2 Cheats
Muuqaalka MOSUND Excel
Tusaha Tusaha Tusaha Tusmada Isticmaalka Dir amarka
Hordhac ahaan BPL-Broadband Laga Isticmaal Xirmooyinka Awoodda
Dib-u-eegis iyo Cabbiraadyo: Bose QC25 Telefoonka Kulanka
Sida loo sameeyo Kaarka Tageerada
Sidee loo xakameeyaa shabakadaha internetka ee iPhone
Ku qor kakabkaaga ugu horeeya ee HTTP
Sida loo abuuro Folders ee Gmail, Subfolders, iyo Calaamadaha Nested
Sida loo Xaqiijiyo Msvcr90.dll Looma Helin ama La Dhimo
Raadiyaha Sony (PlayStation 3) PS3 oo soo bandhigtay liis ay ku qoran yihiin
Tilmaame loogu talagalay in la isticmaalo gudaha gudaha ee SQL ee xogta kooxeed ee ka kooban miisaska kala duwan
Miyuu Tumblr Qalabka Dheerka ah ee Blogging?
Waa maxay Qalabka Smart?
Samee liisto Site ka hor inta aadan dhisin boggaaga
Xagee laga iibsadaa Boorsada Dijital ah
Yamaha MusicCast wuxuu isku xiraa Masraxa Guriga iyo Aqalka Guud
Tababaraha FCP 7 - Qaabka Isku Duubka, Qaybta Koowaad